Midowga Yurub oo qalab iyo gaadiidba ugu deeqay ciidanka booliska soomaaliyeed – STAR FM SOMALIA
Midowga Yurub oo qalab iyo gaadiidba ugu deeqay ciidanka booliska soomaaliyeed
Ururka Midowga Yurub, ayaa Dowladda Somaliya ugu yaboohay qalab iyo gaadiidba, oo loogu talla-galay in wax looga qabto arrimaha ammaanka, laguna horumariyo shaqada Ciidanka Booliska Somaliyeed.
Ka hor inta aan lagu wareejin Dowladda Somaliya, ayaa waxaa munaasabad kooban lagu qabtay Xarunta Xalane oo ku dhex taala Garoonka Aadan Cadde, waxaana looga hadlay taageerada Beesha Caalamka ee siinayso Dowladda, iyadoo ayna ka qaybgaleen masuuliyiinta ugu sareysay ee laamaha ammaanka dalka iyo diblomaasiyiin shisheeye.
Wakiilka Midowga Yurub Ee Somaliya, Michele Cervone d’Urso, ayaa waxaa uu munaasabadda uu ka sheegay in agabyada kala duwan, ee ay uu yabooheen Somaliya ay ka caawinayso xoojinta dhinaca ammaanka.
Wasiirka Amniga Qaranka, C/risaaq Cumar Maxamed oo ka barbar hadlaayay Wakiilka, ayaa Midowga Yurub kaga mahadceliyay taageerada uu markasta siiyo Dowladda Dhexe Somaliya.
Ku Xigeenka Wakiilka Qaramada Midoobe Ee Somaliya, Raisedon Zenenga oo ka hadlaayay munaasabadaasi, ayaa sheegay in Caalamka uu sii wadi doono taageeradiisa ku aadan Somaliya.
Michele Cervone, ayaa agabyada ku wareejiyay Wasiirka Amniga. War Saxaafadeed uu soo sararayna wuxuu ku sheegay in Midowga Yurub uu markasta garab taagan yahay Somaliya.
Muuqaalo laga soo qaaday waxa lagu wareejiyay Wasiirka Amniga, ayaa waxaa ka soo muuqday laba gaari oo keliya, balse War Saxaafadeedka Midowga Yurub waxaa lagu sheegay in qalabka Dowladda lagu wareejiyay, ay ka mid yihiin qalab looga hortaggo miinooyinka iyo qalab kale oo Ciidamada Booliska iyo Badda loogu talla-galay.
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida oo maanta la horgeynayo Xasan Xanafi Xaaji